Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Indlela yokunyanga i-insomnia kunye ne-anti-anxiety?
I-Banana ibetha i-insomnia kunye ne-anti-anxiety, evunywe yi-US FDA.
I-TCI Co., Ltd. kudala ibandakanyeka kuphando kunye nophuhliso lwe-banana peels kunye ne-banana stamens, kwaye ekugqibeleni idlulise imvume ye-US FDA NDI phakathi kwalo nyaka, ibe yibhanana yokuqala yehlabathi. Linyathelo elibalulekileyo kwimveliso yebhanana yaseTaiwan ukuba ingene kwihlabathi, kwaye inethuba elingcono lokubamba amashumi eebhiliyoni zeedola ekutyeni okunempilo eUnited States.
I-TCI yaseTaiwan yazisa ukuba "i-Banana Peel, i-Banana Stamen" ifumene i-FDA's dietary supplement ingredient ye-NDI impendulo yokhuseleko, kwaye ivunyiwe ukuba ifakwe kwimarike yase-US. Le yimeko yokuqala kwihlabathi ukuba i-bhanana entsha yokutya echasene nexhala kunye ne-dietary yebhanana entsha yempilo yamadoda iye yaqinisekiswa yi-US FDA, ekulindeleke ukuba iqhube ishishini lebhanana lasekhaya kwaye lingene kwihlabathi lamashumi. yeebhiliyoni zeerandi kwimarike yokutya okunempilo. I-Banana peels kunye ne-banana stamens zisetyenziswa kumazwe aseYurophu naseMelika, kuba akukho mlando yokutya okufanelekileyo kunye nezinto eziluhlaza kwixesha elidlulileyo, nokuba kukusetyenziswa kokutya kwezempilo okanye ukukhuthazwa koncedo lwezonyango, bekusoloko kunzima. Ngaphambili, i-banana peels, njengenkunkuma yezolimo eyayilahlwa ekuqaleni kwaye ingasetyenziselwa kuphela njengenkunkuma yasekhitshini, zonke zatshintshwa zibe zizinto eziphambili zokutya okunempilo phantsi kophuhliso oluqinileyo lwezobuchwepheshe lwe-TCI.
Inani labantu abanengxaki yokuxhalaba nokudandatheka ehlabathini liya lisanda unyaka nonyaka. I-TCI ye-patent yasekuqaleni "I-Banana Peel Ultrasonic Cold Extraction", ibhanana evuyayo ekhutshwe kwi-banana peel, inezithako ezifanayo kwi-melancholic drug Prozac, enokuphucula kakhulu uxinzelelo, ukuxhalaba kunye nokulala. Uphononongo lwezilwanyana lubonise ukuba ii-extracts ze-banana peel peels ezilawulwa ngomlomo zifunyenwe zine-anti-anxiety kunye nemisebenzi yokudakumba ekujongeni umsebenzi wokuziphatha. Uphononongo lukwabonise ukuba i-banana peels inokuphucula indlela ye-tryptophan metabolism ehambelana ne-gene expression, ikhuthaze ukuveliswa kwe-serotonin kunye ne-melatonin emzimbeni womntu, kwaye ifezekise isiphumo sokulala. Ukuveliswa kwe-Happy Banana kuye kwaphumelela inani leembasa zokuqamba amazwe ngamazwe, kubandakanywa iimbasa ezikhethekileyo kunye neembasa zegolide kuMboniso we-Geneva Invention eSwitzerland.
Ukongeza, i-Angel eyonwabileyo isebenzisa ikakhulu i-banana stamens, imveliso yebhanana, isicatshulwa sayo sinokuthintela ukwanda kwe-prostate. Uphononongo lubonise ukuba lunokunciphisa ngokufanelekileyo ukuveliswa kwe-dihydrotestosterone kwiiseli ze-testicular kunye nokuthintela ngokufanelekileyo ukwanda kweeseli zeprotate yabantu. Ikwaphumelele imbasa yegolide kuMboniso we-Geneva Invention. Ngoku ukuba i-banana peel kunye ne-banana stamen ivunyiwe yi-US FDA NDI, yinto ebalulekileyo kwimveliso yezolimo yaseTaiwan-ibhanana ukungena kwihlabathi. Uphando oluhlukeneyo kunye neziphumo zophuhliso lwe-banana peels kunye ne-banana stamens ziye zazisa ukuphumelela okutsha ekutyeni okunempilo, kunye nakwixesha le-post-bhubhane, ukubonelela abathengi ngokukhetha okungaphezulu kokutya okunempilo.